रविन लिङदेन “आम्भु जेठा
हङकङमा लिम्बु हत्या प्रकरण के हुदैछ ?
[2013-03-22 오후 9:26:00]
हङकङ प्रहरी जवान द्घारा गोलि हानि हत्या भएको स्व. दिल वहादुर लिम्बुको पाचौं स्मरण सभा आइतवार मध्यान्न सम्पन्न भएको छ । सभामा लिम्बुको श्रीमती, छोरी, लुम्फुङवा परिवार, आफन्तहरु लगायत हङकङका स्थानिय नेपाली संचारकर्मीहरु समेतले विधिगत रुपले प्रथना गर्दै एक मिनट मौनधारणा गरेका थिए ।
स्मरण सभामा लुङफङवा समाजका अध्यक्षको तर्फबाट किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष त्रिभुवन लुङफङवाले परिवारका आफन्तहरु र हङकङका स्थानिय नेपाली संचारकर्मीहरुलाई स्व. लिम्बुको मुद्घाको वारेमा जानकारी गराए । अध्यक्ष लुङफङवाले घटना भएयता मृतक लिम्बुको परिवार र मुद्घाको विषयमा सहयोग पु¥याउदै आएका छन् ।
सन १७ मार्च २००९ मा हङकङ प्रहरी जवान द्घारा लिम्बुलाइ गोलि हानि हत्या भए यता यहाँको अदालतमा चरणवद्घ मुद्घा चलिरहेको छ । यतिवेला क्षतिपूर्ती (कम्पन्सेसन) मागदावी मुद्घा अदालतमा चलिरहेको छ । क्षतिपूर्तीको मागदावीका लागि लिगल ऐड प्राप्त भइ सकेको छ । क्षतिपूर्तीको लागि लिगल ऐड मार्फत अगाडि वढेको मुद्घा हङकङमा प्रायजसो नहार्ने कानुनविदहरु वताउछन् ।
लिम्बुको श्रीमती र छोरीलाई एक सोसियल एजेन्सि मार्फत काउलुन डिष्ट्रिक ताइकक्चुइमा दुईवटा कोठा भाडामा उपलब्ध गराएको छ । आठ वर्षिय छोरी तान्छोमा मेफु स्थित डेलिया स्कुलमा पी. थ्रीमा अध्ययन गरिरहेकी छिन् । उनिहरुलाई अन्य खर्चको लागि हरेक महिना प्रति ब्यक्ति पाँच हजार हङकङ डलर सोसियललेनै उपलब्ध गराउदै आएको छ भने छोरीको पढाई खर्च, स्वास्थ सम्बन्धि खर्चहरु उसैले ब्यवस्था गरिदिएको छ ।
निर्दोस लिम्बुको हत्या सम्बन्धी दायर भएको फौजदारी मुद्घामा सर्वोच्च अदालतको कोरोनर्स कोर्ट (मृत्यु सम्वन्धि, तल्लो निकाय) मा ७६ दिनको लामो सुनुवाइ पछि मृतक दिल बहादुर लिम्बुको हत्या कानुन सम्मत भएको पैmसला सुनायो । कोरोनर्स कोर्टको फैसेलाको विपक्षमा पुनरावेदन अदालतमा दायर रिट दायरा गरेको मुद्घामा सन १२ जनवरी २०११ मा पनि पहिले भएकै फैसेला ग-यो ।
पुनरावेदन अदालतमाको फैसेला सम्म लिगल ऐडले सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि, मुद्घा अगाडि वढाउनको लागि लिगल ऐड प्राप्त भएन । मुद्घा अगाडी वढेन । “प्रयाप्त पैसा भएमा स्व. लिम्बुको फौजदारी मुद्घा सम्बन्धि हाई कोर्डमा “कोर्ड अफ एपिल र कोर्ड अफ फाइनल” गरि दुई तहमा रिट दायरा सकिने” स्व. दिल वहादुर लिम्बु संघर्ष समितिका संयोजक रहेका नेपाली महासंघका पुर्व अध्यक्ष हेम लिम्बु वताउछन् ।
लिम्बुलाइ गोलि हानि हत्या गरे यता हरेक वर्ष मार्च १७ मा स्मरण सभा गर्दै आएको छ । चाथौं स्मरण सभा सम्म हङकङ नेपाली महासंघले आफ्नो ब्यानरमा स्मरण सभा गर्दै आएको थियो भने यस पटक लुङफङवा परिवारको अगुवाइमा भएको थियो । स्व. लिम्बुको श्रीमती, छोरी, लुम्फुङवा परिवार, आफन्तहरु र हङकङका स्थानिय नेपाली समुदायहरुमाझ हरेक वर्ष हत्या भएकै स्थान ‘होमातिन, लोक मान सान चुन’ डाँडामा स्मरण सभा सम्पनन हुदै आएको छ ।